Umgangatho ophezulu we-China weMowudi 3 32A Isigaba esinye 3phase Isikhululo sokutshaja se-EV esenziwe kunye neFektri | Itekhnoloji edibeneyo
Umgangatho ophezulu weNdlela 3 32A Isigaba esinye 3phase Isikhululo sokutshaja se-EV
Umgangatho ophezulu woMvelisi weSitishi se-China EV, i-Wall Box Type2 Type1 EV yokutshaja iSitishi, Ngokuqinisekileyo kufanele ukuba naziphi na kwezi zinto zinomdla kuwe, qiniseka ukuba uyasivumela ukuba sazi. Siya kuvuyela ukukunika ikoteyishini yakufumana iinkcukacha zomntu ngokucokisekileyo. Sineengcali ze-R & D zethu zobuchwephesha zokuhlangabezana nazo naziphi na izinto ezivuselelweyo, Sijonge phambili ekufumaneni imibuzo yakho kungekudala kwaye sinethemba lokuba nethuba lokusebenza kunye nawe ngaphakathi kwikamva. Wamkelekile ukuba ujonge umbutho wethu.
Imveliso Isiphumo: 7kW, 11kW, 22kW
Igalelo langoku: 16A, 32A
Igalelo Voltage: 230 ± 10% (1 isigaba), 400 ± 10% (isigaba 3),
I-RCD: Chwetheza A + DC6mA
Isiseko seSocket: 350x250x130mm
Sinezixhobo ezikumgangatho ophezulu. Iimpahla zethu zithunyelwa e-USA, e-UK njalo njalo, ukonwabela ukuma okuhle phakathi kwabathengi boMgangatho oPhezulu weMowudi yaseTshayina 3 32A Isigaba esinye 3phase Isikhululo sokutshaja i-EV, besizama ukufumana intsebenziswano enkulu kunye nabathengi abanyanisekileyo, ukufumana into entsha kraca yozuko kubathengi kunye namaqabane acwangcisiweyo.
Igama loMzekelo I-EVC10-07C1S I-EVC10-07C1C I-EVC10-22C1S I-EVC10-22C1C
230 ± 10% （1 isigaba）
400 ± 10% （3 isigaba)
Igalelo langoku 32A
Isiphumo sangoku 32A
Isiseko esinye sokutshaja
Intambo yokutshaja ye-5m Isiseko esinye sokutshaja Intambo yokutshaja ye-5m
Chwetheza A + DC6mA
IEC 62196-2, Uhlobo lwe-2 lwePlagi
Olona loyilo lubumbeneyo kwintengiso kunye nokusebenza okuphezulu, inkqubo yokutshaja ekrelekrele yezithuthi ezifakwe kwiplagi, eyenzelwe indawo kawonke-wonke kunye neendawo zokutshaja kweshishini. Kulula ukuyifaka, kulula ukuyisebenzisa kwaye kulula ukuyonwabela.
Kuyilo olutsha kunye nokuphuculwa koyilo lwesizukulwana sesibini, kubandakanya ukhuseleko lwangaphakathi lokuvuza. Ezenza ukuba ukufakwa kube lula kwaye kube noqoqosho ngakumbi. Itshaja inxibelelana neqonga lolawulo, elenza libukrelekrele kwaye lenze ukufikelela kwabasebenzisi abaninzi ngekhadi leRFID elilula okanye usetyenziso lweselfowuni lweWallbox.
Inkonzo yokuxhasa umntu: Imilinganiselo 350x250x175mm. 4.3, untouchscreen kunye nesiko ujongano kunye namandla okutshaja ahlengahlengisiweyo kumboniso. Unokuseta ukuya kwiishedyuli ezine zokutshaja kwakhona ukuze zihambelane neendleko zamandla asezantsi.
Egqithileyo Ifektri ngokuthe ngqo kwi-50A 250V AC Type1 Umbane weCar Power Charger iAmerican Standard Evse Uhlobo lweCable 1
Okulandelayo: Ukuvunywa kwe-CE i-32A 7kw i-EV itshaja ekhawulezayo yokutshaja iZithuthi zikaMbane zikaRhulumente nge-Ocpp1.6j
Umvelisi weSitishi se-China EV
I-Wall Box Type2 Type1 EV Isitishi sokutshaja
I-SAE i-J1772 yombane weBhetri yeChaja 32A kunye ...
Uhlobo lweWallbox 2 16A 11kw Izigaba ezintathu ze-European St ...